PEACEFUL PA: April 2012
The Money Question ငွေ - ငွေ - ငွေ
သန်းကြွယ်သူဌေးတွေဟာ ရယ်မော ခဲတယ်။
ဆင်းရဲသားရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ ဘ၀ကလေးဟာ သန်းကြွယ်သူဌေးတွေရဲ့ စည်စိမ်းနဲ့ လဲဖို့ လုံးဝမတန်ဘူး။ တချို့က ဆင်းရဲတာဟာ ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ချမ်းသာတာကတော့ ပျော်စရာ လို့ထင်ကြတယ်။ ဒါက အထင်နဲ့ ပြောတာပါ။ တဖက်တည်းက ကြည့်ပြောတာပါ။
တကယ်တော့ သက်တောင့်သက်သာနေရတာထက် ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား ပိုခံစားရတာ မရှိပါဘူး။ ရယ်မော ပျော်ရွှင်နေတဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးဆိုတာ အတော်ရှားပါတယ်။ တကယ်တော့ ချမ်းသာလာတာနဲ့ အပြုံးတွေ လွင့်ပါးသွားတော့တာပါပဲ။ - Andrew Carnegie in Watchman Examiner.
သန်းကြွယ်သူဌေးတွေဟာ ပြုံး ခဲတယ်။
ခရစ်ယာန် သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး John D. Rockefeller က `သန်းပေါင်းများစွာ ရပေမယ့် မပျော်ဘူးကွာ။ ဒီငွေတွေကို ဟိုတုန်းက တပတ်ကို ၃ ဒေါ်လာစားဘ၀၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရောင့်ရဲနေခဲ့တဲ့ ဘ၀နဲ့ ပြန်လဲလိုက်ချင်တယ် ´ လို့ ပြောဖူးပါတယ်။
W.H Vanderbilt က ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရတာ ဦးနှောက်သိပ်ပင်ပန်းတယ်။ မနိုင်ဝန် ထမ်းနေရတာပဲ။ ဘာမှ ပျော်စရာ မကောင်းဘူး။ ´ လို့ ပြောပါတယ်။
John Jacob Aster ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ချန်ထားခဲ့ပေမယ့် အစာအိမ်ဝေဒနာကို ပြင်းထန်စွာခံစားရင် သနားစရာ အသက်ဆုံးရသူပါ။ သူက `လောကမှာ ငါ့ဘ၀က အဆိုးဆုံးပဲ။´ လို့ ပြောသွားပါတယ်။
ကားလုပ်ငန်းရဲ့ ဘုရင်တဆူဖြစ်တဲ့ Henery Ford က `အလုပ်လုပ်ရတာပဲ ပျော်စရာကောင်းတာပါ။ အလုပ်လုပ်နေရလို့သာ အသက်ရှင်ပျော်တာပါ။ အလုပ်လုပ်ချိန်မှာ ပိုပျော်တယ်။´ လို့ဆိုပါတယ်။
Burbank နဲ့ တွေ့ဆုံး မေးမြန်းခြင်း
` ခင်ဗျားက ငွေရဖို့ သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘူးနော်။ ခင်ဗျားရဲ့ နာမည်ကျော် Burbank အာလူးကို ဒေါ်လာ ၁,၅၀ ထဲနဲ့ ရောင်းခဲ့တယ်။ ဒီအာလူးကို တခြားသူတွေက ထုတ်လုပ်လိုက်တော့ ဒေါ်လာ သန်းချီရသွားကြတယ်။ ခင်ဗျား ငယ်ငယ်က ရုံးတရုံးမှာ အလုပ်လုပ်တော့လည်း လူအများစာ လုပ်နိုင်တဲ့စက်ကို တီထွင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစက်နဲ့ ငွေရဖို့ မကြိုးစားဘူး။
`မရေရာသေးတဲ့ စမ်းသပ်မှုတခုကို လုပ်ချင်နေတာနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ ပျိုးခင်းကြီးတခုကို စွန့်ပစ်လိုက်တယ်။ အပင်သစ်တွေကြီးလာနေမှ တခြားသူတွေကို ပေးလိုက်တယ်။ သူတို့က အဲဒီကနေ ငွေတွေ သဲ့ယူကြတော့တာပေါ့။
`နေတော့လည်း အလယ်အလတ်တန်းစား ဘ၀။ သန်းချီရနိုင်ရဲ့သားနဲ့ တခါတလေ မွဲသွားလိုက်သေးတယ်။ Strawberry Evening Post မှာ ဖတ်လိုက်ရတာကတော့ ခင်ဗျားရဲ့ အပင်မျိုးသစ်တွေဟာ ရေနံတွင်းတွေ၊ ရွှေတွင်းတွေထက်တောင် ချမ်းသာလာစေခဲ့တယ် လို့ ဆိုတယ်။
`ကိုယ်ခံစားခွင့် ရှိလျက်နဲ့ ဘာကြောင့် ဒီအခွင့်အရေးကို မယူတာလဲ? လို့ မေးတဲ့အခါ - - -
Luther Burbank ဆိုတဲ့ အပင်မျိုးသစ် အမေရိကန် တီထွင်ပညာရှင် ဟာ စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ ကျွန်တော်ကို ကြည့်နေပါတယ်။
`ငွေရှာဖို့ ကျွန်တော်မှာ အချိန်မရှိဘူး´ လို့ ရှေ့ကို စိတ်ပါလက်ပါ ကိုင်းညွှတ်လိုက်ရင်း အခိုင်အမာ ပြောပါတယ်။ `ပန်းကလေးတွေနဲ့ စကားပြောရမယ့် အချိန်မှာ ငွေတွေ ရေတွက်နေရမလား? အပင်မျိုးသစ်တွေ ဖန်တီးရမယ့် အချိန်တွေကို အပင်ရောင်းရင်းနဲ့ အချိန်ကုန်နေရမလား? ကျွန်တော် မြတ်နိုးတဲ့ ဒီအလုပ်ထဲကနေ ကျွန်တော့ စိတ်တွေ ဆွဲယူသွားခံရမှာ စိုးလို့ ငွေကို လိုတာထက် ပိုမလိုချင်ဘူး။
`ဒေါ်လာ သန်းချီပြီး မလိုပါဘူး။ ဘာလုပ်မလဲ? အခု စားဖို့နဲနဲ ရှိရင်တော်ပြီ။ ဘဏ်မှာ ကဏန်း ခုနှစ် လုံးလောက် ထည့်ထား လိုက်ရင် ကျွန်တော် ကလေးတွေကို ချစ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ နေရောင်ခြည်ကလည်း တခြား သူဌေးတွေအပေါ် ဖြာကျသလောက်ပဲ ကျွန်တော့အပေါ် ဖြာကျမှာပါ။ သူဌေးတွေအတွက် ပန်းတွေ ပိုမလှသလို မြက်တွေလည်း ပို မစိမ်းပေးပါဘူး။
`ငွေကြောင့် မိတ်ဆွေပိုတိုးလာမယ်၊ ပညာပိုတိုးလာမယ်၊ ပိုပျော်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ချမ်းသာချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေ။ သူများတွေထက် ပိုချမ်းအောင် ကြိုးစားရင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေတဲ့ သူဌေးတွေ မနှစ်ကထက် ဒီနှစ်ပိုများလာတာတွေ့ရတယ်။ ´ လို့ ဆိုပါတယ်။
ငွေကို ဘုရားလို ကိုးကွယ်ရင် ငွေက မြေမှုန့်လို ဖြစ်လာမယ်။ အဲဒီအမှောင်မြစ်ကို ကူးရတဲ့အခါ တံတားရှိမှာ မဟုတ်ပါ။ လောကမှာ ငွေလိုပေမယ့် နောင်ဘ၀မှာ ငွေမလိုတော့ပါ။
ငွေကို ကောင်းကင် စည်းစိမ်အဖြစ် သိုထား၊ သိမ်းထား လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောကမှာ ဘုရားသခင်နဲ့ လူတွေရဲ့ အကျိုးအတွက် သုံးတတ်မှ ရမှာပါ။
From SWORD LXX No. 2
Posted by Papa at 3:05 PM
Labels: Reader, ကျောင်းသုံးဖတ်စာ, ဆောင်းပါးတို
What I know and Do not know သိတဲ့ အရာတွေနဲ့ မသိတဲ့ အရာတွေ By Dr. Bob Jones, sr;
What I know and Do not know သိတဲ့ အရာတွေနဲ့ မသိတဲ့ အရာတွေ
By Dr. Bob Jones, sr;
မသိတာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ မသိနိုင်တာတွေကလည်း အများကြီးပါ။
What? တနေ့ချင်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ မသိနိုင်ဘူး။ မနက်ဖနက ကိုယ့်ကို ဘာတွေ စုဆောင်းပေးနေသလဲ မသိနိုင်ပါ။ ဒီနေ့ လုပ်တာတွေကလည်း ဘာဖြစ်ပေါ်လာမလဲ မသိပါဘူး။
Where? ဘ၀လမ်းဆုံးမရောက်ခင် ဘယ်ကို လမ်းပြခေါ်နေသလဲ မသိရပါ။ လမ်းရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ၀မ်းနည်းခြင်းတွေ စောင့်နေသလဲ? သေခြင်းက ချောင်းမြောင်းနေသလဲ? မသိရပါ။ ဘယ်နေရာမှာ မကြုံချင်တာတွေ ကြုံရမလဲ မသိပါ။
When? ဘယ်အချိန်မှာ မကျန်းမမာ၊ ရောဂါရမလဲ မသိပါ။ ဘယ်အချိန်မှာ စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေ ဖြတ်သန်းရမလဲ မသိပါ။ ဘယ်အချိန် ကြေကွဲစရာတွေ ရိုက်ခတ်လာမလဲ မသိပါ။ ချစ်ခင်သူတယောက် ဆုံးပါးမယ့်အချိန်လည်း မသိရပါ။ သွားနှင့်သူတွေနဲ့ ဘယ်တော့ ပြန်ဆုံရမလဲ မသိပါ။
Why? ဘ၀မှာ ဘာကြောင့် ၀မ်းနည်းစရာတွေ ၀င်လာရသလဲ မသိပါ။ အပြစ်မရှိသူတွေက တခြားသူတွေရဲ့ အပြစ်ကြောင့် ဒုက္ခ ဝေဒနာတွေ ခံစာကြရသလဲ မသိပါ။ လိုတာမရ၊ မလိုချင်တာတွေတော့ ဘာကြောင့် စုပုံရနေသလဲ မသိပါ။
How? တခါတရံ သည်းခံရမယ့် ဝေဒနာတွေကို ဘယ်လို တောင့်ခံရပ်တည်ရမယ်ဆိုတာ မသိပါ။ ဒီုးက္ခတွေကို စိတ်ဝိညာဉ်က ဘယ်လို ဖြတ်ကျော်ရမလဲ မသိပါ။ ကြေကွဲစရာ အဖြစ်ဆိုးတွေ၊ ဒုက္ခတွေကို ဘုရားသခင် မေတ္တာက ဘယ်လို ခွင့်လွှတ်ပေးမလဲ မသိပါ။
Whom? ဒါပေမယ့် တယောက်သောသူကို သိလိုက်ရင် - ဘယ်အရာ What? ဘယ်နေရာ Where? ဘယ်အချိန် When? ဘယ်လို How? ဘာကြောင့် Why? ဆိုတာတွေကို သိဖို့မလိုတော့ဘူး။ `အဘယ်သူကို ယုံကြာ်သည်ကို ငါသိ၏။´ ၂တိ ၁း ၁၂။ သခင်ယေရှုကြောင့် ဘုရားသခင်ကို သိခွင့်ရသွားတယ်။ ဘုရားသခင် ချစ်တတ်တာ သိလာရတယ်။ လူတွေရဲ့ အပြစ်အတွက် သခင်ယေရှု ကားတိုင်မှာ အသေခံရာမှာ ဘုရားမေတ္တာကို သိခွင့် ရလိုက်တယ်။ `ငါတို့ကို ချစ်၍ ငါတို့အတွက် ကိုယ်ကိုကိုယ် စွန့်တော်မူ၏။´ ဘုရားသခင် ပညာရှိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပြီ။ ဘုရားသခင်ဟာ ပညာ အားလုံးရဲ့အစ၊ ညဏ်အားလုံးရဲ့ အစပါ။ အစ၊ အဆုံး သိတော်မူတယ်။ ဘုရားသခင်က တန်ခိုးကြီးမားတယ်။ အရာရာဟာ ဘုရားတန်ခိုးတော်ကြောင့် သူ့နှုတ်မိန့်နဲ့ တည်မြဲနေရတယ်။
ချစ်ခြင်း၊ တန်ခိုးနဲ့ ပညာ စုံလင်တော့ ဘုရားသခင်ကို စိတ်ချလက်ချ အားကိုးနိုင်တယ်။
လူမှာ ဘာလိုသလဲ? လူအတွက် အကောင်းဆုံးက ဘာလဲ? ဘုရားသခင် သိပါတယ်။ တခြားအရာတွေ ဘ၀ထဲ ၀င်လာခွင့် ပေးတော်မူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရင်ဆိုင်ဖို့ စွမ်းအားကိုလည်း ဘုရားသခင် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကို သိထားပြီလား?
Posted by Papa at 12:35 PM
The Words We Say တို့ ပြောကြတဲ့ စကားတွေ
By Mrs. Maggie Chandler
(ကျောင်းသုံး ဖတ်စာ ဖြစ်ပါတယ်။)
စာလုံး တလုံးတည်းလည်းဖြစ်ပြီး၊ သင်ယူဖို့ အရေးကြီးဆုံးစကားကတော့ “Please” `ကျေးဇူးပြု၍´ ဆိုတာ ပါပဲ။
နှစ်လုံးတွဲထဲက အရေးကြီးဆုံး စကားကတော့ “Thank you” `ကျေးဇူးတင်ပါတယ်´ဆိုတဲ့ စကားပါ။
“Please” `ကျေးဇူးပြု၍´နှင့် “Thank you” `ကျေးဇူးတင်ပါတယ်´ ဆိုတဲ့ စကားတွေဟာ ဆားနဲ့ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တွေလိုပါပဲ။ နဲနဲဖြူးလိုက်ရုံနဲ့ ဟင်းကို အရသာတိုးစေသလိုပါပဲ။
“Please” `ကျေးဇူးပြု၍´နှင့် “Thank you” `ကျေးဇူးတင်ပါတယ်´ ဆိုတဲ့ စကားတွေကို ခဏခဏ ပြောလေ့မရှိကြပါဘူး။ ကြိုးစားပြောကြည့်လိုက်ပါ။ စာရေးရာမှာလည်း ထည့်ရေးပါ။ အိမ်မှာ၊ ကျောင်းမှာ၊ အလုပ်မှာ၊ ဘုရားကျောင်းမှာ၊ ဈေးမှာ နေ့စဉ် စကားပြောကြတဲ့အခါ ထည့်ပြောကြည့်ပါ။
သုံးလုံးတွဲ အရေးအကြီးဆုံး စကားကတော့ “I love you” `ချစ်တယ်၊ သဘောကျတယ်´ ဆိုတဲ့စကား ဖြစ်ပါတယ်။ ‘ဒီစကား ၃ လုံးကို တနေကုန် မပြောဘဲ မနေပါနဲ့။ မသုံးဘဲ ပစ်မထားပါနဲ့။ ပေါပေါသီသီ သုံးပါ။ပိုပိုသာသာ သုံးပါ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သုံးပါ။ `ချစ်သားတို့၊ ငါတို့သည် အချင်းချင်း ချစ်ကြကုန်အံ့။´ လို့ အသက်ကြီးသူ တမန်တော် ရှင်ယောဟန်က ပြောပါတယ်။
နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း ဘုရား မေတ္တာကို Candy သကြားလုံးလို ဝေပေးပါ။ ဘုရားမေတ္တာတော်ကြောင့် ချစ်တဲ့အကြောင်း အနီးအနားက လူတွေကို ပြောပါ။ ချမ်းသာသူနဲ့ နာမည်ကြီးသူတွေကို ပြောပါ။ နိမ့်ကျသူနဲ့ အပယ်ခံတွေကို ပြောပါ။ အသက်ကြီးသူတွေကို ပြောပါ။ ကလေးငယ်တွေကိုလည်း ပြောပါ။ လူတွေကို ပေးစရာ မေတ္တာ မလုံလောက်မှာ စိုးရိမ်နေသလား? အတွေးမလွဲပါနဲ့။ မုဆိုးမရဲ့ ဆီဗူးလိုပဲ မေတ္တာမှာလည်း သူ့အလိုလို ပြန် ပြည့်တတ်တဲ့ အံ့သြဖွယ် နည်းတခုရှိပါတယ်။
အပြောရခက်တဲ့ စကားလုံးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ သုံးလုံးတွဲ ပြောရခက်တဲ့ စကားကတော့ “I don’t know” `မသိဘူး´ ဆိုတဲ့ စကားပါ။ ပြောဖို့ ကြုံလာတဲ့အခါ မာနကြောင့် တစ်ဆို့နေပြီး အသံထွက်မလာတော့ပါ။ ကိုယ်မသိတာကို ၀န်ခံတာဟာ မှားသလား?
ဥပမာ။ ကောင်းကောင်းနားမလည်သေးတဲ့ ဘုရားတရား အကြောင်းအရာ တခုကို မေးလာတဲ့အခါ၊ သူများ အထင်သေးခံရမှာ စိုးတာနဲ့ ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ `ဟုတ်ကဲ့၊ စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။ ဆုလည်းတောင်းပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသား ၀န်ခံရရင် မသိပါဘူး ခင်ဗျာ။ မသိဘဲလည်း ရမ်းမပြောချင်ဘူး ခင်ဗျာ။´ လို့ ပြောတာ မှားပါသလား?
အထင်လွဲခံရမှာ စိုးရိမ်နေသလား? သူတို့ စိတ်ထဲမှာ `တော်သေးတယ်။ သဘောကျစရာ ကောင်းတယ်။ သူ့ကို ယုံကြည်လို့ ရတယ်။ မသိတာကို ၀န်ခံရဲသားပဲ။ သူသိတာ ပြောတဲ့အခါလည်း ယုံလို့ ရနိုင်တာပေါ့´ လို့ ပြောကြမှာပါ။
နှစ်လုံးတွဲ ပြောရခက်တဲ့ စကားကတော့ “I am sorry!” `၀မ်းနည်းပါတယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူး´ ဆိုတဲ့ စကားပါ။ တကယ် ၀မ်းနည်းနေချိန်မှာတောင် `၀မ်းနည်းပါတယ်´ လို့ ပြောဖို့ ခက်ပါတယ်။ စိတ်ထဲကတော့ `၀မ်းနည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်မှားသွားပြီ။ ခွင့်လွှတ်ပါနော်´ လို့ တိုးတိုးကလေး ပြောချင်နေပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာကတော့ အလိုမကျတဲ့ မာန်ဖီနေတဲ့ ကြောင်အိုတကောင်လို တွန့်ဆုတ်နေတတ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တလုံးတည်း ပြောရခက်တဲ့ စကားကတော့ “No” `ဟင့်အင်း´ ဆိုတဲ့ အငြင်းစကားပါပဲ။ ဒီနေ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေမှာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့တာတွေရဲ့ အကျိုးကို ခံစားနေရတာပါ။
မနက်ဟာလည်း ဒီနေ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ရတာဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်ပါ။ ပိုဆိုးတာက ရွေးချယ်မှုတွေကို ငယ်စဉ်ဘ၀မှာ လုပ်ကြရတာပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ရွေးခဲ့တာတွေနဲ့ပဲ တသက်လုံးနေရကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
`မသောက်ဘူး´ လို့ ငြင်းတတ်ရင် ဘယ်တော့မှ အရက်သမား မဖြစ်ပါ။ ´မသုံးဘူး´လို့ ငြင်းရင် မူးယစ်ဆေးသမား မဖြစ်ပါ။ ´မကစားဘူး´ လို့ ပြောရင် လောင်းကစားသမား ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ပါ။ သွေးဆောင်တာကို ´ဟင့်အင်း´ လို့ ငြင်းတတ်ရင် လက်ထပ်တဲ့နေ့အထိ ဖြူစင်နေမှာပါ။
“No” ဟာ အင်္ဂလိပ်စကားမှာ အပြောရအခက်ဆုံး စကားပါ။ ဒါပေမယ့် အထိရောက်ဆုံး စကားတခွန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ( From Baptist Trumpet )
Posted by Papa at 12:53 AM
Labels: Reader, ကျောင်းသုံးဖတ်စာ
ဘာသာရေးအကြောင်း ပြောမယ်ဆိုရင် …….. When We Talk on Religion ……
( လွတ်လပ်စွာ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကိုးကွယ်ကြဖို့ရာ အကြံပြု စကားမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ )
၁။ သူတပါး ဘာသာကို မပုတ်ခတ်၊ မဆဲရေးပါနဲ့။ Please do not curse others.
ယဉ်ကျေးတာဟာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယဉ်ကျေးသူဟာ လူမှုရေးမှာ ကောင်းရုံမျှပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဘာသာတရားဟာ လူမှုရေးထက် ပိုသိမ်မွေ့တဲ့အရာပါ။ ဘာသာတရားဆိုတာ တမလွန်အကြောင်း စဉ်းစားတော့မှာ၊ မြင့်မြတ်တဲ့ လမ်းကို လျှောက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့က ဆဲတတ်တယ်။ ဒါဟာ မယဉ်ကျေးတာ ဖြစ်လို့၊ ဘာသာတရား နဲ့ကတော့ အဝေးကြီးပါ။ တချို့ကတော့ ယဉ်ယဉ်းလေး ဆဲပြန်တယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆဲတာဟာ၊ ဆဲတာပါပဲ။
၂။ သူတပါး ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားကို မပုတ်ခတ်ပါနဲ့။ Please do not say evil things on other god.
လူသဘောက ကိုယ့်မိဘ မကောင်းရင်တောင်၊ မိဘမကောင်းကြောင်း လာမပြောစေချင်ဘူး။ အဖေ အရက်သမား ဖြစ်ပေမယ့် သားရှေ့မှာ .. `မင်းအဖေ၊ အရက်သမား´ လို့ ပြောရင် စိတ်ကောင်းပါ့မလား?။ လူမှုရေးအရ ရိုင်းသွားမှာပေါ့။
တကယ်တော့ သူဘာသာအယူမှားတာက ကိုယ့်ကို ဘာဒုက္ခမှ မပေးပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာအယူမှားနေတာက ကိုယ့်အတွက် တကယ့် ပြဿနာပါ။ သူမှားရင် သူတွေ့လိမ့်မယ်။ ကိုယ်မှားတော့ ကိုယ်ကြုံရမှာပါ။
၃။ ကိုယ့်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို တကမ္ဘာလုံး လိုက်ကိုးကွယ်ဖို့ မမြော်လင့်ပါနဲ့။ Please do not expect that the whole world will convert to your religion.
လောကမှာ အလင်းနဲ့ အမှောင်၊ အမှားနဲ့ အမှန် ရှိနေတာပဲ။ ဘာသာတရားတချို့ တိမ်မြုပ် ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပေမယ့်၊ မကောင်းတဲ့လူတွေကတော့ ကမ္ဘာကုန်သည်အထိ ရှိကောင်း၊ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ လူလောကမှာ ပြဿနာ အရှုပ်ဆုံးက လူတွေပဲ မဟုတ်လား?
၄။ ကိုယ့်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို နာမည်ကြီးတဲ့ လူတွေ ( ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ မင်းသမီး၊ သူဌေးကြီး၊ အတတ်ပညာရှင်၊ အသိပညာရှင် ) ကိုးကွယ်တာများ အရသာခံ ပြောမနေပါနဲ့။ Please do not say that some peers convert to your religion.
အဲဒီလူတွေ ကိုးကွယ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ဘုရားက ပိုမှန်၊ ပိုတန်ခိုး ရှိသွားမလား? အဲဒီလူတွေ မကိုးကွယ်လို့ကော အလကားနေရင်း မှားသွား၊ တန်ခိုးလျော့သွားမလား? ဘာသာတရားကို ကလေးလိုတွေးရင် အဲဒါမျိုးတွေပြောပြီး ဂုဏ်ယူနေတတ်ပါတယ်။ ဘုရားမပြောနဲ့ လူတောင်၊ သူတပါး ချီးမွှမ်းတာနဲ့ ပိုတော်လာပါ့မလား? ကဲ့ရဲ့လိုကော ညံ့သွားလို့လား? ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ချီမွမ်းခြင်းဟာ သူတပါးရဲ့ သတ်မှတ်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀အမှန်မှ မဟုတ်ပဲ။ သူများကိုးကွယ်လို့ လိုက်ကိုးကွယ်ရင်၊ သူများမှားရင် ကိုယ်ပါမှားတော့မှာပေါ့။
၅။ တနိုင်ငံလုံး ကိုးကွယ်ဖို့လည်း ဖိအားမပေးပါနဲ့။ Please do not force to setastate religion.
ဦးနုက နိုင်ငံတော် ဘာသာလုပ်ဖို့ အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ညစ်ပတ်တာပါ။ ( အဲဒါနဲ့ K.I.A တောခိုသွားရော။ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းချင်ရင်၊ အုပ်ချုပ်သူက စ- ညစ်ပတ်တာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ) စစ်မှန်တဲ့ ဘာသာရေးသမားဟာ သူ့ဘာသာ သူပဲ လိုက်လျှောက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကို ဖိအားမပေးဘူး။ ဖိတာဟာ အဓမ္မ လုပ်ရပ်ပါ။ ဓမ္မမဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည်က ဘာ..ဘာသာမှ မကိုးကွယ်ဘူး။ လူတဦးချင်းစီက ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုးကွယ်ကြတာ။ တခြားသူတွေအတွက် လူတယောက်ယောက်က ဆုံးဖြတ်ပေးရတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ ကိုယ့်ဘာသာ အကျိုးအပြစ် ခံစားကြရတာပါ။
၆။ ဘာသာတရားနဲ့ လူမျိုးရေးကို ရောမပြစ်နဲ့။ Please do not mix up religion with your nationality.
ဒါက လူတချို့ မှားတတ်တဲ့ အမှားပါ။ လူမျိုးဆိုတာ မွေးရာပါဗီဇပါ။ ဘာသာတရားကတော့ မွေးဖွါးပြီး ကြီးပြင်းလာရင်း တမလွန်အကြောင်း တွေးရင်းက လိုက်လျှောက်ဖို့ ရွေးချယ်တဲ့ လမ်းကြောင်းပါ။ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ အရာပါ။ ဒါကို မသိဘဲ၊ ငါတို့လူမျိုး၊ ငါတို့ဘာသာဆိုပြီး မိရိုးဖလာအစွဲနဲ့ ပြောနေရင်တော့ ဘာသာတရားဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့သူ ဖြစ်နေမှာပါပဲ။ တကယ်တော့ ဘာသာတရားတခုထဲကိုပဲ မတူတဲ့ လူမျိုး ၂ မျိုး ကိုးကွယ်တဲ့အခါ၊ အဲဒီဘာသာအပေါ် အလေးထားပုံ၊ အသားပေးပုံ ၊ ကျင့်သုံးပုံတွေ ကွာနေတတ်ပါတယ်။ ကွန်မြူနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ရုရှားတွေ ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးရင် ဒီမိုကရေစီ သဘာဝ ပျက်တော့မှာပဲလို့ တွေးကြောက်သူတွေ ရှိသလိုပေါ့။ စစ်သွေးကြွတတ်တဲ့ လူမျိုးနဲ့ လိမ်တာကောက်တာ အကျင့်ပါတဲ့ လူမျိုး ၂ မျိုး ဘာသာတခုတည်းကို ကိုးကွယ်ရင် အရည်အသွေးတူ ဖြစ်နေဖို့ မလွယ်နိုင်ပါ။ ဘာသာတရားကို စပျစ်ရည်လို့ သဘောထားရင်၊ လူမျိုးဟာ ထည့်တဲ့ ဗူးတို့၊ ခွက်တို့ ဆိုပါဆို့။ ဗူး၊ ခွက်ကွာရင် အရသာ ကွာတော့မှာပါ။
၇။ လူတွေအပေါ် တကယ်မချစ်တတ်၊ စေတနာနဲ့ မကူညီတတ်ပဲ ဘာသာရေးအကြောင်း မပြောပါနဲ့။ Please help others in need before you talk them on religion.
ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို၊ မကူညီပဲ မျက်နှာလွှဲတတ်သူတွေဟာ ဘာသာတရားနဲ့ အလွန်ဝေးပါတယ်။ လူတွေကို တကယ်စာနာတတ်မှ၊ တကယ်ကူညီတတ်မှ စေတနာမှန်ပါမယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ လူတွေကို ကျွန်ပြုနေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ဘာသာရေးပြောနေတာပါပဲ။ တပါးသူတယောက် ကိုယ့်ဘာသာထဲဝင်လာတာကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်နေရင်တော့ ဘာသာရေးကို ဘောလုံးပွဲလို သဘောထားနေတဲ့ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်ပဲ။ တရား တကယ်မကျင့်ဘူး။ လူတယောက်ရဲ့ အခုလောလောဆယ် အခက်အခဲကိုတောင် မကူညီချင်ရင်၊ တမလွန်ရေး စေတနာထားတယ်လို့ မပြောပါနဲ့။ ညာနေပြီ။ အဲဒီလို စိတ်ကောင်း၊ နှလုံးကောင်းနဲ့ ဒုက္ခရောက်သူတွေကို ကူညီတာကို ဘယ်ဘာသာတရားကမှ မတားမြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘာသာရေးအကြောင်း သူတပါးကို ပြောချင်ရင်၊ လူမှုရေးအရင်လုပ်ပါ။ ဒါမှ သဘာဝကျပါတယ်။
Posted by Papa at 3:44 AM
Labels: Religion, ဘာသာရေး, ဆောင်းပါးတို
နှလုံးရောဂါ Heart Attack
နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးရပ်ခြင်းနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းတို့ ခြားနားပုံ
နှလုံးထဲကို သွေးစီးဆင်းမှု နဲပါးတာ ကြာရှည်လာတဲ့အခါ နဲ့ ရပ်တံ့သွားတဲ့အခါ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်လာပါတယ်။ အောက်စီဂျင် ပြတ်တာဟာ နှလုံးကို ပျက်စီးစေပြီး၊ သေစေနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးရပ်ခြင်း Cardiac Arrest
ရုတ်တရက် နှလုံးအခုန်ရပ်တဲ့အခါ ဖြစ်တာပါ။ နှလုံးသွေးကြောထဲကို သွေးနဲ့ အောက်စီဂျင် မ၀င်တဲ့အခါ ဖြစ်တာပါ။
ဦးနှောက်ထဲ သွေးစီးဆင်းမှု ပိတ်ဆို့သွားတဲ့အခါ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်သွေးကြောများထဲမှ သွေးနဲ့ အဟာရ မစီးဆင်းတာ ကြာတဲ့အခါ ဖြစ်တာပါ။လေဖြတ်ပြီး မီးနစ်ပိုင်း အတွင်းမှာ ဦးနှောက်သွေးကြောတွေ သေစပြုပါတယ်။
Posted by Papa at 11:49 PM
ဘာသာရေးအကြောင်း ပြောမယ်ဆိုရင် …….. When We Talk o...
What I know and Do not know သိတဲ့ အရာတွေနဲ့ မသိတဲ့...